San Miguel de Escalada, jawharad ka hor Romanesque-ga León | Wararka Safarka
Luis Martinez | | dhaqanka, Guides
San Miguel de Escalada waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn taallo ka hor-romanesque ah ee gobolka León. Waxay ahayd guri keniisad ah oo loo daahiriyey 913 si loogu soo dejiyo suufiyada Córdoba, laakiin hadda kaliya kaniisadda iyo qaar kale oo ku tiirsan.
Waxay ku taalaa degmada Darajooyinka, oo qiyaastii labaatan iyo toddoba kiiloomitir u jirta caasimadda León iyo gudaha Wadada Santiago. Kaniisadda waxaa lagu dhisay kaniisaddii hore ee Visigoth oo loo daahiriyey, sida muuqata, San Miguel. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato jawharadan kahor-Romanesque, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad sii wadato aqrinta.
1 Taariikhda San Miguel de Escalada
2 Astaamaha San Miguel de Escalada
3 Koodhka San Miguel de Escalada
4 Sida loo tago San Miguel de Escalada
Taariikhda San Miguel de Escalada
Sannadkii 912, koox suufiyado ah oo uu hoggaaminayo Abbot Alfonso ayaa yimid aaggan León. Iyagoo go'aansaday inay halkaa sii joogaan, waxay ka dhisteen hal sano oo keliya guri keniisad ah, oo horeyba u ahayd 913, oo uu quduus ka dhigi doono hoggaamiyaha kiniisaddu Saint Genadius ee Astorga.
Dhismaheeda, waxay ka faa'iideysteen qalab ka yimid dhismihii hore ee Visigothic ee aan ka hadlaynay. Tani wali waxay ka muuqataa mid ka mid gidaarradeeda, halkaas oo aad ka arki karto qoraal ka yimid macbudkii asalka ahaa. Dhinaceeda, macbadka wuxuu ku noolaa xilligiisii ​​ugu fiicnaa qarnigii XNUMXaad, xilligaas oo lagu daray qaar ka mid ah walxaha cusub ee dhismaha.
Horeba XIX, ula wareegida ay sababtay Mendizábal hantida kiniisadda, San Miguel de la Escalada waa laga tegey. Si kastaba ha noqotee, waxay soo martay dhowr dib u soo celin iyo, horaantii 1886, ayaa lagu dhawaaqay Taallo Qaran.
Portico ee San Miguel de Escalada
Astaamaha San Miguel de Escalada
Sidaan soo sheegnay, dhismahan wuxuu ka jawaabayaa astaamaha farshaxanka kahor romanesque. Taasi waa, isla wixii ay soo bandhigaan Santa Maria del Naranco o San Miguel de Lillo gudaha Oviedo. Si guud marka loo eego, waxay isku daraysaa walxaha Visigoth iyo walxaha kale ee reer Mozarabic.
Si kastaba ha noqotee, khubarada hadda jirta waxay doorbidaan inay wacaan farshaxanka dib u hagaajinta. Sababta, sidaad qiyaastayba, waxay tahay in ay dhisteen Nasaaradii degaysay dhulalkii Castiil ee ay ka tageen Muslimiintu in ay dib u degaan. Laakiin, maaddaama aagagga xudduuda ay marwalba wadaagaan xiriirada, qaabkani sidoo kale wuxuu leeyahay xoog element mozarabic, taasi waa in la yiraahdo, si isku mid ah Masiixiyiinta laakiin taasi waxay ka timid dhul ay leedahay Al-Aldalus.
Dhinaca kale, sidaan sidoo kale soo sheegnay, dhismaha San Miguel wuxuu helay dhowr kordhin waqtiyo dhismihiisa ka dib. Kuwa la ilaaliyo waxaa ka mid ah munaaraddii romanesque weyn laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad ee xukuma qaybta koonfureed ee dhismaha.
Laakiin, ka mid ah qaybaha dhismaha ee maanta la keydiyay, kaniisaddu waa cunsurka ugu muhiimsan. Hayso warshad basilica waxayna u kala baxdaa saddex meelood oo badhkeed, oo iyana, ay u kala baxaan qaansooyin dhaqameed qaanso fardo Muslimiinta. Sidoo kale, inta u dhexeysa labada dhinac iyo madaxa macbadka waxaa ku yaal meel bannaan oo qotoma oo u shaqeysa sida transept iyo in loogu talagalay wadaadada xafladaha.
Dhinaceeda, madaxa ayaa leh seddex kabood kuwaas oo semicirik ah gudaha, laakiin leydi ka baxsan. Intaas waxaa sii dheer, kuwan waxaa daboolaya qasnadaha gallon oo la mid ah kuwa aad ku arki karto masaajiddo badan oo Carbeed.
Inta udhaxeysa transept iyo madaxa waxaa jira a iconostasis oo lagu sameeyay tiirar qaab iskutallaab ah, oo ku jira dacwada Hispanic, ka qariyey wadaadka aaminka inta lagu jiro Quduuska. Tani waxay ahayd dhaqan xafladeed oo lagu ilaalin jiray qaddiyadda jasiiradda illaa midkii Roomaanka la qaatay qarnigii kow iyo tobnaad Iconostasis wuxuu ahaa cunsur dhisme oo bixiyay sirtaas. Caadi ahaan, waxay ahayd shaashad lagu sharraxay ujeeddooyin diimeed oo la hor dhigay meeshii allabariga. Waxay ka bilaabatay in lagu isticmaalo macbudyada Byzantine, halkaas oo ay uga sii gudubtay Galbeedka.
Faahfaahinta meelaha fardo fardo ah ee San Miguel de Escalada
Dhanka dibedda, macbudku malaha barxad horumarsan, oo ah wax caan ku ah Asturian pre-Romanesque. Albaabada laga soo galo waa lateral iyo qeybteeda galbeed. Dhab ahaan, dhinaca koonfureed ee kaniisadda waxaa ku yaal a gallery arcaded leh fallaadhihii fardo taasi qurxisa guud ahaan. Qeybtaan wax dhiseysa, xoogaa goor dambe maxaa yeelay waxaa la dhisay qarnigii XNUMXaad, sidoo kale waxay caan ku tahay macbudyada Asturia oo markii dambe si ballaaran loogu isticmaali lahaa dhismaha romanesque.
Ku saabsan nalalka kaniisadda, waxay sidoo kale raacaysaa astaamaha macbudyada kale ee Masiixiyiinta hore. Sidaa darteed, waxaa lagu gaadhay daaqado yar yar oo kuyaala gidaarka duulaya ee labada dhinac ee ugu waaweyn iyo apses-ka. Ugu dambeyntiina, saqafka waxaa lagu taageeraa laba waji oo wuxuu leeyahay jiirad leh dhagaagyo ballaadhan.
Waxay ahayd cunsurkii ugu dambeeyay ee lagu daro dhismaha San Miguel de Escalada, horaantii qarnigii XNUMX-aad.Waxay leedahay buulal cufan oo asal ahaan ka koobnaa saddex dabaq. Gudaha waxaa laga soo galayaa albaab leh halbowle yar yar oo wareega kuu qaadaya Wadaadka San Fructuoso, sidoo kale loo yaqaan Pantheon of Abbots.
Laakiin badanaa waxay muujineysaa daaqada qaanso fardaha laba-gees leh. Joogitaankeedu waa mid xiiso leh maxaa yeelay munaaraddu waa Romanesque. Sidaa darteed, qaansooyinka noocan ah mar dambe lama isticmaalin. Haddii sidan la yeelay, waxay ahayd in lagu daydo midka laga helay qaybta galbeed ee macbudka.
Ugu dambeyntiina, qurxinta San Miguel de Escalada waa aad hodan u ah waqtigeeda. Waxay ka kooban tahay caasimado, baraf, albaabo iyo albaabo. Marka laga hadlayo ujeeddooyinkooda, khudaarta ayaa badan. Tusaale ahaan, rucubood, caleemo iyo geedo timireed. Laakiin sidoo kale waxaa jira qaabab kale oo joomatari ah sida tidcin ama meheshyo iyo xayawaanno, sida shimbiraha oo ku calaacalaya xidhmooyinka geedka canabka ah.
Koodhka San Miguel de Escalada
Qiyaastii sanadka 922, ayaa Abbot Victor, oo ka mid ah macbadka Leonese ee naga khuseeya, wuxuu amar ku bixiyay abuurista koodhadh koobiyeyn doona 'Faallo ku saabsan Kitaabka Muujintii' laga bilaabo Beatus ee Liebana. Natiijadu waxay noqotay waxa loogu yeero 'Waxaa barakaysan San Miguel de Escalada', oo loo aaneynayo iftiinka sayidka Magus. Si kastaba ha noqotee, koodhadhkan, sida muuqata, laguma sameynin kaniisadda Leonese, laakiin kan San Salvador de Tábara, oo ku yaal magaalada Zamora ee isla magaca. Waqtigaan la joogo, 'Beato de San Miguel de Escalada' ayaa lagu keydiyay gudaha Maktabadda Morgan laga bilaabo New York.
Dhabarka macbadka Leon
Sida loo tago San Miguel de Escalada
Taalladaani waxay ku taal, sidaan u sheegnay, degmada Leonese ee Darajooyinka. Sida kaliya ee lagu tagi karo taalada waa wadada. Waxaad leedahay basas ka socda caasimadda gobolka, laakiin aad uma badna. Taladeenu waa inaad gasho gaarigaaga.
In laga sameeyo León, waa inaad qaadataa N-601 taas oo isku xirta magaalada Valladolid. Marka ugu sarreysa Villarente waa inaad qaadataa LE-213 kaas oo ku geyn doona Gradefes. Laakiin, kahor intaadan gaarin caasimada degmada, waa inaad qaadataa a leexashada dhanka bidix isagoo ku dhawaaqaya macbadka.
Gabagabadii, San Miguel de Escalada Waa mid ka mid ah dhismooyinka waaweyn ee pre-Romanesque-ka dhammaan Castile. La xidhiidha asxaabteeda Asturia, quruxdeeda kaama tagi doonto danayn la'aan. Horay u soco oo booqo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » dhaqanka » San Miguel de Escalada
samee Bilaha 8
Markii la dhisay San Miguel de Escalada, Castilla waxay ahayd degmo ka tirsan boqortooyada León, sidaa darteed raajiidadii reer Andalus ee ay degeen waxay ku sugnaayeen León. Maanta, dhismahan wuxuu ku yaal gobolka León, Castilla y León, sida magaceedaba ka muuqata, wuxuu ka kooban yahay laba gobol. Marka macbudku ma ahayn mana aha Castilian.
Marka laga soo tago khaladaadka taariikheed iyo farshaxanimo (in kasta oo aanan tilmaamin), haddana waa wax laga xumaado in Beato de Escalada midkoodna aan laga sheegin (jawharad dhab ah), maanta maktabadda Morgan iyo matxafka ku yaal New York.
San Miguel de Escalada waa magaaladayda waxayna ku taal León! maahan Castilla! Ma waxaad jeceshahay inaad saxdo oo aadan qorin wax aan jirin.
Ku jawaab Valdabasta